Maxaa Ciise ku qoray cammuudda? | Apg29
Waxaad ka heli doontaa jawaabta xiiso!
Aayaddan Bible meeshii Ciise ku qoray dhulka (waa dhulka, ma ciid), waxaan ka heli sheekadii dhilladaba hanjabay dhagax by Farrisiintii iyo culimmadii.
Yooxanaa 8: 6-8. Waxay waxaas u yidhaahdeen, iyagoo jirrabaya, oo waxay leeyihiin wax ay ku ashtakeeyaan. Laakiin Ciise waa foororsaday oo u qoray oo farta ayuu dhulka la. 7 Oo markay istaageen oo weyddiiyey, ayuu istaagay oo yiri: ". Eebe waa kan aan dembi lahayn waxaa laga yaabaa in ku tuuro dhagax ugu horeysay" 8 Oo markaas ayuu foororsaday oo dhulka wax ku qoray.
Waxaan la weydiiyey mar wuxuu Ciise ku qoray cammuudda. Waxaad ka heli doontaa jawaabta xiiso.
Ha noo akhriyey macnaha guud oo dhan in ay si wanaagsan u fahmaan.
Yooxanaa 8: 2-11
Aroor hore ayuu dib u yimaadeen inay u site macbudka. Dhammaan dadka isaga ka ag dhow soo ururiyey, oo intuu fadhiistay, ayuu wax baray. 3 Markaasaa culimmadii iyo Farrisiintii waxay u keeneen naag sino lagu qabtay. Waxay dhigay iyada oo hore ay 4 oo wuxuu ku yidhi, "Macallimow, naagtan waxaa lagu qabtay ee falka, marka iyana way ka sinaysatay. 5 In Muuse sharciga nagu amray in la dhagxiyo tan oo kale. Maxaad dhihi kartaa?" 6 Waxay waxaas u yidhaahdeen, iyagoo jirrabaya, oo waxay leeyihiin wax ay ku ashtakeeyaan. Laakiin Ciise waa foororsaday oo u qoray oo farta ayuu dhulka la. 7 Oo markay istaageen oo weyddiiyey, ayuu istaagay oo wuxuu ku yidhi: ". Eebe waa kan aan dembi lahayn waxaa laga yaabaa in ku tuuro dhagax ugu horeysay" 8 Oo markaas ayuu foororsaday oo dhulka wax ku qoray.9 Oo markay taas maqleen, ayay ka tageen, mid mid, waayeelladii ugu horeysay, oo uu keligiis ayuu hadhay iyo naagtii dhexda joogtay. 10 Ciise toosan oo ku yidhi iyada, "Naag yahay, xaggee bay joogaan? Miyuu Ninna miyaanu ku xukumin?" 11 Waxay ku jawaabay, "Maya, Sayidow, ma." Ciise wuxuu ku yidhi, "maayo Anna ku xukumi. Tag, oo mar dambe ha dembaabin!"
Ciise muujiyeen in hadal iyo camal
In this section Bible caanka ah, waxaan sida caadiga ah oo kaliya ayaa iftiimiyay waxa Ciise ayaa sheegay in uu yahay kan aan dembi lahayn horta dhagax tuur, ka dibna waxay ka tageen dhuftay by erayada Ciise maxaa yeelay, iyagu ma ay dembi lahayn.
Laakiin Ciise ayaa u dhaqmaan of qoraal laba jeer on farta ayuu dhulka wax la xidhiidha waxa uu sheegay in la.
Tani waxay ku sameeyey Farrisiintii iyo culimmadii. Iyagu ma ay mistook Ciise bandhig.
Markii ay maqashay wixii Ciise wuxuu ku yidhi wuxuu arkay bandhig, si ay u ogaa dhab ahaan waxa uu ula jeedo. Waxay waayeen gudaha Bible iyo soo baxay oo ogaa waxa ay ahayd.
"Kuwa iga dhici waa sida qoraal ah oo ciidda ku"
In Yeremyaah ee Axdiga Hore, waa qoran tahay:
Rabbiga, rajadii reer binu Israa'iil. Qof kasta oo aad Joojiyay u iman doonaan inay waxba ahayn. Kuwa iga dhici waa sida qoraal ah oo ciidda ku. Iyagu waxay ka tageen Rabbiga ah ishii biyaha nool.
Ciise tusay by falkan Farrisiinta iyo culimmadaba, oo waxay iska dhacay oo Ilaah looga tegey.
Haddaba Ciise ayaa sidoo kale sheegay in kuwa aan dembi lahayn horta dhagax tuur, inay wax kale oo aan ahayn in ay sii daayaan dhagaxyada iyo iska socdaan, waayo, Ciise by dhulka wax ku qoray in ay iska dhacday Eebe iyo u muuqatay qoraal ah oo ciidda ku tusay ma uu samayn karin.
Maxaa dhacaya qorniinkii lagu qoro cammuudda? Kaalmihii biyaha iyo dabaysha.
Comment by Yeremyaah 17:13
Rabbigu waa rajadii reer binu Israa'iil
Sidii Rabbigu rajadii reer binu Israa'iil, isagu waa rajo. Ma heshay Ciise, aad leedahay mustaqbal iyo rajo ah. Haddii aadan helin Ciise samayn doonaa ka hor inta ay goori goor tahay.
Qof kasta oo isaga qudhiisu baxay iman doonaan inay baabba '
Qabo on inuu Ciise, ilaa iyo inta aad ku nooshahay. Markaasuu maalin maalmaha ka mid aad u noqon doonaa dhamaadka badbaadi marka aad guriga soo samada. Laakiin isaga tagayaan, waxaad la ceeboobi doonaan. Oo ninna ma uu doonayo in uu ka xishoon?
Kuwa iga dhici waa sida qoraal ah oo ciidda ku.
Tani waa weerarka ah iyo sharaxaad looga adkaan Ciise ayaa sidoo kale muujiyey in ay Farrisiintii iyo culimmadii. Waxay isla markiiba fahmay waxa Ciise ku qoray cammuudda markii ay ku hanjabeen in ay dhagax dhilladaba, waayo, waxay garanayeen sidoo waxa ku qoran Yeremyaah 17:13. Waxaa jira cawaaqib aad u weyn in ay ka tagis Rabbiga. qorniinkii lagu qoro cammuudda ah laga tirtirayaa by dabaysha iyo biyaha.
Iyagu waxay ka tageen Rabbiga
Maxaad u ekaan mid ka mid ah ku qoran cammuudda? Maxaa yeelay, iyagu waxay ka tageen Rabbiga.
Isha biyaha nool ah
Ciise waa biyaha nolosha. isaga de su badbaadiyey iyo hesho nolosha weligeed ah. isaga tanaasulaan Farrisiintii iyo culimmadii sameeyey. Iyagu waxay ka tageen isha biyaha nool ah sida ay Yeremyaah 17:13, ka dibna lahayn nolosha weligeed ah.